Muxuu ka yiri Berbatov wararka la xiriirinaya Gareth Bale inuu dib ugu laabanayo horyaalka Premier League?? – Gool FM
(Yurub) 18 Sebt 2020. Xiddigii hore ee kooxaha Tottenham Hotspur iyo Manchester United ee Dimitar Berbatov ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay in lagu sii dhawaanayo in si rasmi ah loogu dhawaaqo dib ugu laabashada Gareth Bale ee Spurs, kaddib markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya kooxdiisa haatan ee Real Madrid.
Xiddiga reer Bulgaria ayaa xaqiijiyay in heshiiskan uu kooxda reer London ee Tottenham Hotspur uu siin doono weerarka ugu xoogan ee Horyaalka Premier League, si la mid ah Liverpool.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Sport news” ee dalka England Dimitar Berbatov ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Gareth Bale wuxuu jecel yahay Tottenham, oo ah meeshii ugu horreysay uu isugu muujiyay adduunka oo dhan, waana wax uu markale sameyn karo”.
“Tayada waligeed ma baaba’ayso, 31 sano, wali wuxuu awood u leeyahay inuu door muhiim ah ka ciyaaro Spurs, waana talaabo sax ah”.
“Wey adag tahay in la yiraahdo isaga kaligiis ayaa awood u yeelan kara inuu ka dhigo Spurs koox si dhab ah ugu tartami karta koobab, laakiin waxay tusin karaan adduunka inay ka gudbi karaan waxyaabo halis ah”.
“Bale, Harry Kane, Son Heung-min iyo Dele Alli, macalimiintu waxay sameyn karaan wax walba si ay u helaan safka weerarkan oo kale, warqad oo kaliya ayey hadda ku yihiin weerarka ugu xoogan Premier League, sida Liverpool oo kale”.